Semalt Expert Anoziva Nzira Yokusunungura Google Analytics Kubva Mhere
Kuongorora maitiro eGoogle Analytics kunokosha zvikuru. Kuenderera mberi, Ivan Konovalov, nyanzvi yepamusoro kubva Semalt , achakuudza kuti ungabvisa sei ruzha nemamwe mafungiro ezvidzidzo.
Google Analytics ndeimwe yemapuratifomu ane simba ekuwana ruzivo uye ruzivo runokosha pamusoro pewebsite dzako. Zvose zvingave zvakananga kana kuti zvisina kukanganisa kuita bhizimisi rako 'kukura. Usati wachera zvimwe zvezvipfeko, iwe unofanirwa kuita zvisarudzo zvinokosha uye usarudza nzvimbo dzakatendeka kuti ubvise ruzha.
Zvakachengeteka kutaura kuti kubudisa ruzha kubva kuGoogle Analytics kunokosha. Iwe unofanirwa kuchinja dzimwe nhoroondo yako uye kuwana dzimwe nzira dzekunatsa rwiyo. Kunyanya, iwe unofanirwa kuverenga kuti ndeupi mutengesi nzvimbo yako iri kugamuchira uye kuti ungachengetedza sei unhu. Kuita mawebhusayithi akawanda kune nyore, asi zvakaoma kutarisana nemafungiro akawanda, kuve nechokwadi chokuti webhusaiti yako inogamuchira hits yepamusoro. Iwe unogonawo kuwana zvakaoma kutarisana nezvikwata zvezvinyorwa uye unoda rubatsiro rwemumwe munhu munyaya iyi. Zvimwe zvinhu, zvisinei, zvinokosha kwatiri tose.
Kutanga ma filters eGoogle Analytics
Mafirimu eGoogle Analytics, sezvinojeka nezita racho, anotipa nzira yekugadzirisa uye kuderedza data. Kazhinji, izvi zvinogona kuonekwa muchikamu chekuona peji. Google Analytics ine unhu hwayo pachayo kubvumira vashandi vayo kuumba mafaira akawanda anowirirana navo..Yese firiji ine zvinhu zvayo, uye uchishandisa mafiritsi. Iwe unogona kubvisa kana kuisa data yakananga. Uyezve, unogona kugadzira tsika dzemafriji zvakare dzinoshandiswa pamutemo wemirairo dzave dzataurwa muAssign Filter sections.
Bvisa ruzha nemafuta makuru
Zvakakosha kushandisa mafikisi kune maonero ako sezvo inobata data inopinda neinobuda. Iwe unogona kudzorera mafaira akachunwa uye kuiswa kwemashoko pane imwe pakombiyuta yako.
Asi usati waita izvozvo, unofanira kuramba uchifunga nezvezvinhu zvinotevera:
1. Kusinganisi mukati mukati IP filter
Unofanira kubvisa maonero kubva kune sangano rako kuti uve nechokwadi chehutano hwako. Anenge mishonga yose yakasimbiswa inoita saizvozvo uye inoshandura dhenda yavo nguva nenguva. Kushanyira kunobuda zvakananga kubva kuhofisi yako kune zvakasiyana zvikuru nekushanyira kwekunze kwemashoko. Iwe unogona kungosiya zvinyorwa zvemukati ye IP kubva pane chikamu chekuona kuGoogle Analytics. Izvo zvinogona zvakare kushandisa mafikisi akasiyana-siyana kumakwikwi nekombiji dze IP. Kana iwe webhusaiti yako yakakura uye iwe uchishandisa chinonzi Google Manager, unofanirwa kumira kutumira maonero kumawebsite ako akashandurwa muGoogle Manager nemitemo uye macros.
2. Zvinyorwa zveScottcase uye chikwata chekukoka
Unofanirwa kumanikidza pasi madutu filters pamishandirapamwe uye maitiro avo emigumisiro yakanaka. Paunoshandisa kuisa mararamiro ekuumba chimiro chekuda kwemashoko epawebsite, iwe unofanira kutumidza imwe nharaunda kubva kune vateereri vorudzi rwavo uye firiji yakasikwa iyo. Somuenzaniso, iwe unogona kutora firiji seW LinkedIn uye utanga kugamuchira motokari zvakananga kubva panzvimbo iyoyo yevaraidzo.
Idzi idzi dzinonyanya kukosha mafungiro ekubvisa ruzha. Tariro, iwe unogona kuwana ruzivo rwakakwana kubva kune pfungwa idzi uye unogona kuchengeta unhu nekuvimbika kwewebsite yako.